रत्नपार्कबाटै विदेश जाने नेपालीहरूलार्इ यस्तो भने मुकुन्देले! – PathivaraOnline
Home > विचार > रत्नपार्कबाटै विदेश जाने नेपालीहरूलार्इ यस्तो भने मुकुन्देले!
admin April 10, 2018 विचार 0
काठमाडौं । ‘पहाडमा रेलैरेल । मधेसमा खेतैखेत । ट्याक्टरले खेत जोत्ने । हेलिकप्टरले बीउ छर्ने । १० करोडसम्म जनतालाई सुखले पाल्ने । र, ३६५ दिन नै दसैं घोषणा गर्ने न्यूनतम कार्यक्रम छ ।’ यो कुनै ठूलो राजनेताको भाषण होइन । केही वर्षअघिसम्म रत्नपार्कका रुखमाथि चढेर भाषण गरी चर्चामा कमाएका मुकुन्दे अर्थात् मुकुन्द घिमिरेले आफ्नो ट्वीटर एकाउन्टमार्फत अघि सारेको राष्ट्र निर्माणको योजना हो ।
भर्खरै पोखरा विमास्थलबाट अायो यस्तो दुःखकाे खबर
‘लकडाउन’का बेला बाटो हिड्ने बटुवाहरूलाई के थाहा नागरिक दायित्व?